Shirweynihii Beesha Cali Saleebaan ee magaalada London
Shirweynihii Beesha Ismaaciil Cali ( Cali Saleebaan ) ee magaalada London
Waxaa maalinimadii axadda ay bisha June aheyd 3, ka dhacay magaaladda London shir aad u ballaaran oo ay kasoo qeyb galeen aqoonyahanno, waxgarad, Culumo iyo arday wax ka barata jaamacadaha waddanka, oo ka kala yimid dhammaan gobolada Ingiriiska sida Birmingham, Leicester, Leeds, iyo xaafadaha kala duwan ee London.
Shirkaas oo ay soo qabanqaabiyeen aqoonyahano Beesha Ismaaciil Cali ah, ayaa waxaa isaguna maalintaas goob joog ahaa, oo lagu marti galiyey Siyaasiga weyn Xirsi Ismaaciil Sanweyne, oo ahaa Xildhaibaan Dowladii fedraalka ee Carta lagu soo dhisay.
Ugu horeyntii waxaa halkaas hadalo soo dhaweyn iyo warbixinba kasoo jeediyey Miciin Axmed Cali, oo ka warbixiyey Ujeedooyinka shirkan iyo xaaladda Beesha meel walboo ay joogaanba. Sidoo kale waxaa halkaa hadal wacdi iyo alle ka cabsi kasoo jeediyey sheikh Axmed Cabdi iyo Maxamed Xasan Caraale.
Kadib waxaa hadalkii lagu soo dhaweeyey Siyaasiga Xirsi Ismaaciil, oo runti halkaas kasoo jeediyey Khudbad qiimo leh, oo taabaneysay dhinacyo baddan. Mudane Xirsi Ismaaciil waxaa uu si tifatiran uga hadlay guud ahaan xaaladda uu dalku haatan marayo, sida ay lagama maarmaan u tahay in la helo qaranimo Soomaaliyeed, iyo sidoo kale waxa uu si gaar ahaaneed ugu nuux nuuxsaday inay lagama maarmaan tahay in leys wacyi geliyo oo si wada jir ah wax loo wada qabsado.
Waxaa iyaguna halkaas ka hadlay aqoonyahanadii shirka kasoo qeyb galay qaarkood, oo runti is tusaaleeyey sida ay lagama maarmaan u tahay in la helo isku xir beesha dhexdeeda ah, gudo iyo dibadba si looga wada shaqeeyo horumarka beesha ee xagga waxbarashada, Arimaha bulshada, caafimaadka iyo weliba sidi wax loogu qaban lahaa dadka dhibateysan ee Soomaaliyeed meel walboo ay joogaan, gaar ahaan beesha intooda ku sugan degaanada aan nasiibka u helin in adeegyada muhiimka ah wax laga qabto.
Ugu danbeynti waxaa halkaas la sameeyey guddi laga soo dhex dooranayey dadkii goobtaas isuga yimid, waxaana codeyn kadib halkaas lagu doortay guddiga kala ah:-
Miciin Axmed Cali ( Gudoomiye )
Cabdikariim Maxamed Cumar ( Secretary )
Cabdixakiim Jaamac Jooje. ( Treasure )
Ugu danbeystii waxaa halkaas hadal kooban kasoo jeediyey Gudoomiye Miciin oo isagu loo doortay Gudoomiyaha Beesha Ismaaciil Cali ee UK.
Faahfaahin dheeraad ah la xiriir Guddiga Beesha.
By:- Cabdixakiim Jaamac Jooje